Buurtii Foolatay, Ma Bakaylay Dhashay? Qaybtii Labaad
Friday June 26, 2020 - 23:06:08 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Buurtii Foolatay, Ma Bakaylay Dhashay? Qaybtii Labaad Haddii aanad qaybtiikoobaadee qormadan soo akhrisan, fadlan ka soo akhriso mareegaha daabacay. Waxaynnu sidaasi u leenahay, maqaalku dhandhan kuu yeelan maayo - haddii aannu kuu taxnayn!
Si aynnu qormada uga sii wadno halkii ay innoo taagneyd ee ahayd,madashii maxaa ka dhacay?Aynnu jelleecnomadasha oo Jubuutiahayd iyo sidii ay wax uga dhaceen.
Runta marka la sheego, dawladdaJabuuti; si aad ah ayay iskaga xilsaartay: soo dhaweyntii wufuudda, maamuuskii iyo martigelintiiba - waanay ku ammaanan tahay.
Marka laga reebo: gacanqaad la'aanta,cafuufta(mask)kaafka lagu xidhnaa iyo xaaladaha kale ee uu abuuray(covid 19)kuoo suudhkii iyo salaantiiba shiiqiyey, haddana waxa garoonka qurxiyey: qadiifaddii casayd, askarta safnayd labada dhinac ee qadiifadda oo iyaguna xidhnaa direys cas!
Marka aynnu dhinaca kale ka eegno, xagga soomaalida waxay maalintaasi ahayd maalin taariikhi ah! Waayo, waa maalintii ay abidkood meel ku kulmaan:saddex madaxweyneoo soomaaliyeed,ra'iisulwasaare iyo xubno wasiirro ah oo intaasi tiradoodu tahay -iyaga oo ka arrinsanaya danaha ummadda soomaaliyeed. Sidaasi awgeed, qof kasta oo damqasho iyo diir soomaaliyeed lihiba aad ayuu ugu faraxsanaa shirka dhici doona - oo la filayey in wax weyni ka soo bixi doono!
Marka laga tago dadka caadiga (the grass roots),aqoonyahanka soomaliyeed wuxu filanayey - gaar ahaan kuwa shirarka caalamka la socdaa; in wax weyn la diyaariyey oo ay jireen, guddi hoosaadyo farsamo oo muddo dheer soo shaqaynayey - madaxdana loogu yeedhaysaxeexiddawaxyaabihii la soo diyaariyeyiyo bilidda xafladda!!
Waxase uu madashii boodhku ka duulay, markii wafdi waliba miiskii dhinac ka fadhiistay ee uu akhriyeykhudbadhaatankowah oo weliba ah iga qabo iyo waa markaygii!!
Nin Soomaaliyeed ayaa beri hore laga sheegay, in uu yidhi, "Afar qolobo mid keentay, waxay soo dhoodhoobeen
waa dhaankii dabagaale ee dhirfacowga lahaa."
Halkaa marka ay marayso, ayuu ninkii caqliga lahaa ka hadhay shirka oo uu yidhi, "Wallee af aan arko, ilko kama soo jeedaan!"iyo macno la'aani, "Soomaali waa meheraddeedii!"
La soco akhriste, qaybaha dambe ee qormada oo aynnu ku qaadaa dhigi doonno - waa haddii aynnu nafta haynnee-
qolo waliba ujeedada ay shirka u tagtay iyo waxa ay kala soo noqotay.